01/04/13 ~ Myanmar Forward
ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ်စဲရေး ကော့သောင်းမြို့ခံများ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်
ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ ၆၅နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားနဲ့အတူ ကချင်ဒေသ စစ်ပွဲရပ် ဆိုင်းရေး ဆန္ဒသဘောထား ထုတ်ဖော်ပွဲတခုကို တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ ကော့သောင်းမြို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ထံမှ (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ် ရေးနေ့ အခမ်းနားသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
Posted by drmyochit Friday, January 04, 2013, under မိန့်ခွန်း | No comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အဂ္ဂမဟာသရေစည်သူ၊ အဂ္ဂမဟာသီရိသုဓမ္မ ဦးသိန်းစိန်ထံမှ (၆၅) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းနားသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-
ထိုးစစ်ဆင်မှုများရှိနေသော်လည်း KIA တပ်ရင်း (၆) တွင် စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲထူးခြားစွာပြုလုပ်
KIA တပ်မဟာ (၂) လက်အောက်ခံ တပ်ရင်း (၆) တွင် (၂) လခွဲကြာပြုလုပ်ခဲ့သော စစ်သင်တန်း ကျောင်း ဆင်း ပွဲ (၃/၂၀၁၂) ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသတင်း ရှိရပါသည်။ ၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ တွင် စတင်ခဲ့ပြီး ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်နေ့တွင် သင်တန်းသား ၃၀၉ ယောက်ဖြင့် သင်တန်းဆင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါ သည်။
KIA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင် ဆေးကုသနေကြောင်း လိုင်ဇာရောက် သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ အတည်ပြု ပြောကြား
KIA စစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် ဂမ်ရှောင်သည် KIA တပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်း ပစ်ခတ် လုပ်ကြံ မှုကြောင့် ဒဏ်ရာ ရရှိ နေကြောင်း၊ ယခုလ(၃)ရက်နေ့က သတင်း ထွက်ပေါ် ခဲ့သော် လည်း KIA မှ ၎င်းသတင်း မဟုတ် မှန်ကြောင်း ငြင်းဆို ခဲ့သည်။
Posted by drmyochit Friday, January 04, 2013, under ဆောင်းပါး | No comments
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း တိုက်ပွဲတွေ စတင်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ ကချင်စစ်ပွဲကို အကြောင်းပြပြီး နော်ဝေး၊ ဗြိတိန် နဲ့ အနောက်နိုင်ငံတွေဆီမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး စီမံချက်တွေ ရေး၊ ဒုက္ခသည် အကြောင်းပြပြီး ရလာမယ့် အကျိုး အမြတ် တွေအတွက် ထိုင်းနယ်စပ်က အခွင့်အရေးသမားတွေ စုပြုံရောက်လာခဲ့ကြတယ်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် တပ်မတော်နှင့် KIO, KIA တို့အကြား တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်း နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
Posted by drmyochit Friday, January 04, 2013, under ကြေငြာချက် | No comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် ( ၁ / ၂၀၁၃ )
၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်
၁၃၇၄ ခု၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၇ ရက်
၁။ ကချင်ပြည်နယ်တွင် ကေအိုင်အို/ကေအိုင်အေ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များက မြစ်ကြီးနား-ဗန်းမော် ပြည်ထောင်စု လမ်းမကြီးအား အဓိကပိတ်ဆို့လျက် တပ်မတော် စစ်ကြောင်း များအား မိုင်းထောင်ခြင်း၊ ခြုံခို တိုက် ခိုက်ခြင်းနှင့် အများပြည်သူအသုံးမပြုနိုင်အောင် ပိတ်ဆို့ခြိမ်းခြောက်မှုများ ပြုလုပ်လျက်ရှိ သည့် ပွိုင့် ၇၇၁ တောင်ကုန်းနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသအား မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ရှင်းလင်းတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ သွားရမယ့် ခရီးဝေးသေးကြောင်း၊ ခြေလှမ်း မှားတွေနဲ့လည်း ကြုံရနိုင်ကြောင်း၊ ဒါပေမဲ့ မိမိအနေနဲ့ အခုထိ ဖြစ်ထွန်းမှုတွေ အပေါ် အကောင်းမြင်ကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအကြံပေး မစ္စတာ Vijay Nambir က ပြောလိုက်ပါတယ်။
မလေးတွင် ရခိုင်(၃) ဦး အသတ်ခံရပြီးနောက် ရခိုင်တချို့ နေရပ်ပြန်
မလေး ရှားနိုင်ငံ Alor Setar ခရိုင်တွင်ရခိုင် အလုပ်သမား (၃) ဦး အသတ် ခံရပြီးနောက်ပိုင်း အဆိုပါ ဒေသ တွင် အလုပ် လုပ်ကိုင်နေသော ရခိုင်အမျိုးသား တချို့ မိမိ နေရပ် ဒေသသို့ပြန်သွားကြသည်ဟု မလေးရောက် ရခိုင်အမျိုးသား တစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမောင်သန်းနိုင်က ပြောသည်။
မိုးထိမိုးမိခေါင်းဆောင် ၄ ဦး ထောင်ဒဏ် ၆ လ စီရင်ခံရ
Posted by drmyochit Friday, January 04, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
အလုပ် သမား အခွင့် အရေးတွေ အတွက်နေပြည်တော်ကို လမ်းလျှောက် ချီတက် ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့တဲ့ မိုးထိ မိုးမိ ရွေလုပ်သားခေါင်းဆောင်လေးယောက်ကို ဒီကနေ့ ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်နေ့ မနက်မှာ ရေတာ ရှည်မြိ်ု့နယ် တရားရုံးက ထောင်ခြောက်လစီနဲ့ ဒဏ်ငွေ တစ်သောင်းစီ ကျခံစေဖို့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် လိုက် တယ်လို့ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် ခံရ သူတွေရဲ့ မိသားစု ၀င်တွေက ပြော ပါတယ်။
ယမန့်နေ့က မြဝတီ မီးလောင်မှုတွင် ကလေးငယ်တစ်ဦး မီးထဲပါ
ယမန်နေ့ 3. 1. 2012 ည ၁၂ နာရီ၁၅ မိနစ် ခန့်တွင် မြ၀တီမြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် စိန်ပန်း လမ်းနှင့် နှင်း
ဆီ လမ်းထောင့် အတွင်း မီးလောင် မှုဖြစ် ပွားရာ ရှစ်နှစ် အရွယ် ကလေးငယ် တစ်ဦး မီးထဲ ပါသွားကြောင်း သိရ သည်။
ရင်နာနာနဲ့ လှမ်းကြည့်နေရတဲ့ လိုင်ဇာ လို့ ခေါ်တဲ့မြို့..
ဒီနေရာကို တိုက်ရင် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေးကို ပျက်ပြားစေတယ်လို့ ဆိုတဲ့မြို့..
နိုင်ငံခြားသားတွေ အပါအ၀င် လူဦးရေ ၅ သောင်းကို ကေအိုင်အိုဆိုတဲ့ ကချင်ကို ကိုယ်စားပြုတယ် ဆိုသော လက်နက်ကိုင် ၅၀၀၀ အုပ်ချုပ်တဲ့မြို့…